नेपाल समाचारपृष्‍ठ - Nepal Samacharprishtha: प्रतिभाहरुलाई माथि उठाउँदै पूर्वी चितवन साहित्य सम...
नेपाल समाचारपृष्‍ठ - Nepal Samacharprishtha: प्रतिभाहरुलाई माथि उठाउँदै पूर्वी चितवन साहित्य सम...: पूर्वी चितवनलाई भावनात्मक र रचनात्मक रुपमा बाँध्न थप भूमिका निर्वाह गर्ने कार्य समाजले गरेको छ । पूर्वी चितवन क्षेत्रमा रहेका एक नगरपालिकाका स्रष्टाहरु अर्को नगरपालिकामा गएर रचना सुनाउने र उक्त क्षेत्रका रचनाकारहरुलाई फेरि अर्को नगरपालिकामा आउन निम्तो दिने कार्य समाजले गर्दै आएको छ । यस क्रममा खैरहनी नगरपालिकाका स्रष्टाहरु रापती, कालिकास्थान र रत्ननगर नगरपालिकामा गई रचनामार्फत् साइनो गाँस्ने र उक्त क्षेत्रका स्रष्टाहरुले अन्य नगरपालिकामा गई परस्परमा साइनो गाँस्ने गरेका छन् । अहिले स्रष्टा तथा कलाकारहरुमा उत्साह बढेको छ । उनीहरुको हिजो र आजमा भारी अन्तर आएको छ । रचनाहरुको स्तर र गौरव बढेको छ । कलाकारहरुको चिनाजानी र परिचय फैलिँदै गएको छ । साहित्य र कलामा लागेर केही गर्न सकिँदैन भन्ने कमजोर मानसिकतामा धेरै परिवर्तन आएको छ । भेटै हुने सम्भावना नभएका साथीहरुसँग भेट भएको छ, समूह बनेको छ । अवसरका सम्भावनाहरु एकपछि अर्को गर्दै क्रमशः बढेर गएको उनीहरुले पाएका छन् । उनीहरुका पछिल्ला क्रियाकलापहरुले ...
Posted by समाचारपृष्‍ठ - SamacharPrishtha at 11:57 AM No comments:
नेपाल समाचारपृष्‍ठ - Nepal Samacharprishtha: प्रतिभाहरुलाई माथि उठाउँदै पूर्वी चितवन साहित्य सम...:
पूर्वी चितवन क्षेत्रका साहित्यिक प्रतिभाहरु र स्थानीय साहित्यलाई उजागर गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ पूर्वी चितवनका चार वटा नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरु समेटेर गठन भएको पूर्वी चितवन साहित्य समाजले अहिले आएर पूर्वी चितवन क्षेत्रमा रहेका फरकफरक स्थानका साहित्यिक प्रतिभाहरु र कलाकारहरुको खोजी र उजागर गर्दै आएको छ । सर्वप्रथम खैरहनी नगरपालिकाबाट कार्यक्रम गर्दै अघि बढेको उक्त समाजले मासिक रुपमा कहिले रापती नगरपालिकामा त कहिले कालिकास्थान नगरपालिकामा कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दै अघि बढेको देखिन्छ । यस समाजले साहित्यसँगै संगीतलाई पनि सँगसँगै for detail information click here ...
Posted by समाचारपृष्‍ठ - SamacharPrishtha at 11:53 AM No comments:
नेपाल समाचारपृष्‍ठ - Nepal Samacharprishtha: सफल हुनु पनि दुर्भाग्य ???
नेपाल समाचारपृष्‍ठ - Nepal Samacharprishtha: सफल हुनु पनि दुर्भाग्य ???: मानिस सफलताका लागि निकै दौडधूप गर्दछ, मरिमेट्छ । उसले जीवनको धेरै भाग सफलताको दौडमा खर्च गरेको हुन्छ । सफलता भनेको के हो ? भन्ने वास्तविकता नबुझेर सर्वसाधारणको हल्लाका आधारमा सतही सफलताको आधार तय गरेपछि उसमा यस खालका समस्याहरु आउँदछन् । अध्ययन भन्नाले पढ्नुमात्र होइन त्यसको बोधको गहिराइ पनि जोडिन्छ । शिक्षित भन्नाले स्कुले शिक्षा वा विश्वविद्यालयको शिक्षामात्र होइन, अनुशासन, नैतिकता र संस्कारको शिक्षा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मानिसले कुनै तहसम्मको अध्ययन गरेपछि वा कुनै जागिर खाएपछि उसको आनीबानीमा एकाएक परिवर्तन हुन पुग्दछ भने ऊ धेरै काँचो ...
Posted by समाचारपृष्‍ठ - SamacharPrishtha at 9:50 AM No comments:
नेपाल समाचारपृष्‍ठ - Nepal Samacharprishtha: दाम्पत्यजीवन पूर्णतः विवादरहित हुन नसक्ने
नेपाल समाचारपृष्‍ठ - Nepal Samacharprishtha: दाम्पत्यजीवन पूर्णतः विवादरहित हुन नसक्ने: एक अर्थमा परिवार पनि एउटा सानो घरायसी राज्यजस्तै हो । यहाँ पनि कुनै न कुनै व्यक्तिको नेतृत्व स्वीकार हुनु अनिवार्य हुन्छ । समाजमा पनि आदरणीय व्यक्तिहरुको आदर गर्नुपर्छ नत्र समाज समाजजस्तो नभई अराजक र अनियन्त्रित मानिसहरुको दिशाहीन जमात हुन पुग्दछ । बाँदर लगाएतका अन्य प्राणी तथा आदिवासीहरुमा पनि नेतृत्वको स्वीकृति हुन्छ, जुन प्राकृतिक रुपमा नै स्वतः आवश्यक भएर आउँछ । राज्य पनि यही अवस्था र निरन्तरताको विकसित स्वरुप हो । यस खालको सोच पनि एक अर्थमा सही नै देखिन सक्छ । तर ...
Posted by समाचारपृष्‍ठ - SamacharPrishtha at 9:46 AM No comments:
नेपाल समाचारपृष्‍ठ - Nepal Samacharprishtha: भुसुनाहरुको राष्ट्रभक्ति स्टाटस् र जोडदार हावाहुरी...
नेपाल समाचारपृष्‍ठ - Nepal Samacharprishtha: भुसुनाहरुको राष्ट्रभक्ति स्टाटस् र जोडदार हावाहुरी...: हावाहुरी भन्नाले हावा चलेर बनेभनेको हुरी । अडिन नसक्ने लक्षण भएको पदार्थको एक विचलित प्रकार । अन्यत्रै केही वाष्पीकरण भएपछि आफ्नो स्थानमा अडिन नसकेर अरुको स्थानको अभाव पूर्ति गर्नका लागि उतैतिर जान दौडधूप गर्दा बस्ती अन्धकार बनाउने गरी चल्ने एक पदार्थ, तरल भन्दा पनि हुने । विचलित पदार्थ भन्दा ...
Posted by समाचारपृष्‍ठ - SamacharPrishtha at 9:22 AM No comments:
नेपाल समाचारपृष्‍ठ - Nepal Samacharprishtha: ती आमाबाबु छुट्टिने भए, केटाकेटीको के गति होला ?
नेपाल समाचारपृष्‍ठ - Nepal Samacharprishtha: ती आमाबाबु छुट्टिने भए, केटाकेटीको के गति होला ?:
१४ कार्तिक २०७३ बेलुकाको ६ बज्दै गरेको समय । भर्खर कम्प्युटर खोल्दै । जम्मा ४ मिनेट ४७ सेकेन्डको भिडियो । फेसबुक वाल हेर्दै । वालमा एउटा भिडियोको लिंक आयो । शीर्षक घटनाप्रधान थियो । क्लिक गरिहालियो । हेर्दा त एक भिडियो युट्युबमा अपलोड गरिएको रहेछ । उक्त भिडियो कतिसमयसम्म युट्युवमा रहन्छ भन्ने कुराको यकिन गर्न सकिँदैन । मैले पनि उक्त लिंक यहाँ दिने हिम्मत गरिनँ । उक्त भिडियो हेर्दा ...
Posted by समाचारपृष्‍ठ - SamacharPrishtha at 9:13 AM No comments:
सारोरेगो - sarorego: संगीत र सारोरेगो : संक्षिप्त परिचय
सारोरेगो - sarorego: संगीत र सारोरेगो : संक्षिप्त परिचय: संगीत भनेको सुर, ताल र सोँचको मिश्रण हो । सुरका पनि विविध आधारहरु हुन्छन् । ती आधारहरुमा आधारित सुरहरु र तिनका विविध समूहको भूमिका पनि... for detail, click here.
Posted by समाचारपृष्‍ठ - SamacharPrishtha at 1:46 PM No comments:
नेपाल समाचारपृष्‍ठ - Nepal Samacharprishtha: प्रति...